Alohan'ny hamerenanao ny tenanao dia alao antoka fa hametraka an'ity fanontaniana ity ianao - Blog
Mieritreritra ny hamerina hamorona tena ve ianao? Avy eo dia tsy maintsy vakinao tsara ity alohan'ny hanombohanao.
Amin'izao fotoana izao, zara raha afaka mipetaka amin'ny magazine ianao na mizaha Internet nefa tsy mifanehatra amin'ny tantaran'ny olona nanangana tena indray, nahita fahasambarana sy fandriampahalemana.
Ho an'ny olona sasany, ny fiovana dia mety ho madinidinika, toy ny fanamboarana endrika izay ahitan'izy ireo taovolo vaovao na fitafiana hafa, noho izany dia somary hafa amin'ny olona taloha izy ireo.
Ny sasany mety hanao fomba mihoa-pampana kokoa, manova ny làlan'ny asa sy toerana misy azy, toy ny famoahana asa amin'ny maha mpisolovava na banky fampiasam-bola mba hamboly kale sy hiompy akoho any amin'ny toeram-pambolena ambanivohitra antsasaky ny firenena.
Ny fanaovana fanovana lehibe eo amin'ny fiainantsika dia mety ho katolika mampino, saingy alohan'ny handraisana fepetra hanatanterahana izany dia misy fanontaniana iray tokony horesahina amin'ny marina:
Rehefa manao an'ity fanovana ity dia mankany amin'ny lavitra ny tena tena izy ve ianao?
Fahamarinana Vs. manao
'Ho anao irery ihany no fahamarinana' dia fomba fiteny izay tokony hifikirantsika rehetra. Nefa olona tsy tambo isaina no mody manao zavatra hafa ankoatry ny tena ao anatiny - izay tena tian'izy ireo hahatongavana - raha te hifanaraka amin'ireo faribolana sosialy dia mino izy ireo fa tokony ho anisan'ny.
Misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny fandatsahana hoditra taloha izay tsy mety aminao intsony mba ho lasa tena tena izy ianao, ary ny fanomezana akanjo izay heverinao fa ho tian'ny olon-kafa bebe kokoa.
Efa nanandrana nisandoka ho zavatra tsy dia lava ve ianao? Mandreraka be ny mitazona maso lava, ary na dia mety hahafinaritra aza ny milentika kely an'io andraikitra io mandritra ny fotoana fohy, dia mety hiafara amin'ny farany fadiranovana ary tezitra.
Vao mainka aza sarotra kokoa ny raharaha raha toa ka mifamahofaho tanteraka amin'ny fiainan'ny olon-kafa ny fiainan'ny olon-kafa.
Ohatra, ndao lazaina fa misy bandy tena maniry ny hiaina fomba fiaina mpifindra monina, mitety an'izao tontolo izao ary miasa tapa-potoana amin'ny toeram-piompiana voajanahary raha manoratra ny boky nofinofisiny foana ny hamorona.
Angamba izy avy amin'ny fianakaviana mpanankarena izay milomano amin'ny zavatra toy izany, ka na dia nanandrana nikomy tamin'ny fanirian'izy ireo aza izy fony izy mbola tanora noho ny nidirany tao amin'ny tarika punk ary nanao fihodinana roa tao amin'ny rehab, dia nopetahany ihany ilay akanjo olona iray izay hireharehan'izy ireo amin'ny fanandramana hidirana.
Taona vitsivitsy nandritra ny fifaninanana golf sy klioba fisakafoanana hariva taty aoriana, hitany fa nanambady vady tsara tarehy tsy tiany izy, miaraka amin'ny zaza iray (na telo) tsy sitrany noho ny fandrika azy amin'ny fiainana tsy tadiaviny.
Na dia ho sarotra kokoa aza ny namakivaky tamin'ny voalohany, tsy ho safidy tsara kokoa ve ny fahatokisana ny fitiavany tena izy amin'ny farany?
9 amin'ireo boky fanampiana tena tsara azo ampiasaina ankehitriny
Fa maninona no mody mody?
Mety misy antony maromaro mahatonga ny olona hamerina amin'ny laoniny ny tenany amin'ny làlana izay manalavitra azy ireo amin'ny maha-marina azy fa tsy mankany aminy, fa ny antony voalohany dia ny fanekena tsotra.
Voamarikao ve hoe firy ny olona manana fitafiana miasa tsy mitovy amin'ny fomba fitafiny amin'ny fotoany avy? Ho an'ny maro, ny asany dia andraikitr'izy ireo fa tsy fanitarana ny tena maha izy azy.
Ny asa mahafa-po izay maneho ny tena toetran'ny olona dia rendrarendra tsy fahita firy. Betsaka no misafidy asa heverin'izy ireo fa hiorina sy hahazo tombony fa tsy noho izy ireo mandrehitra ny fanahy.
Rehefa manaiky ny asa misy saina ny olona iray fa tsy ny filana, dia matetika no mitaky lavitra kokoa amin'ny tena maha izy azy noho izay mety nokasainy tany am-boalohany.
Mora ny manery ny fetra ary mampiditra ny lafin'ny fitongilanana tena izy amin'ny zavatra toy ny fitafiana sy ny latabatra rehefa misy ny mpiasa ambany, fa raha vao manomboka ny fampiroboroboana dia tsy maintsy miova ny raharaha.
Mety holazaina amin'ny olona iray fa tokony hiakatra fampiroboroboana izy ireo raha toa ka lokon-koditra voajanahary ny volon'izy ireo, na tsy mijanona mifampiresaka amin'ny akanjony intsony izy ireo ka miova. Avy eo izy ireo dia tsy maintsy mianatra ny fomba fitondran-tena amin'ny fomba iray rehefa mifanerasera amin'ny filankevi-pitantanana, noho izany dia saron-tava hafa ihany no hokapohina.
fandokafana holazaina amin'ny lehilahy
… Ary mitohy hatrany hatrany hatrany. Raha dinihina ny habetsaky ny fotoana lanintsika mandritra ny androm-piainantsika, dia mety ho mora ny manadino hoe iza marina isika rehefa mandany 40+ ora isan-kerinandro mody olona tsy izy isika. (Na mihoatra noho izany, raha mino ny olona ifaneraserantsika fa isika no saron-tava hitany fa tsy ilay mitafy azy.)
Fomba tsara hamerenanao ny tenanao
Raha tokony hanatona ny famerenana amin'ny laoniny amin'ny fangatahana hoe inona no azonao ovaina mba ho tian'ny olon-kafa sy hanaiky anao bebe kokoa, ny fomba tsara kokoa dia ny manontany tena hoe inona amin'ireo lafiny amin'ny fiainanao heverinao fa mety (na tokony) hiovanao mba hiaina marina kokoa, ary mifanaraka bebe kokoa amin'ny hoe iza marina ianao.
Mety ho fomba fiasa mahery ity satria olona maro tokoa no tsy mahalala hoe iza marina izy ireo ao anatiny ary misaron-tava sy maka tahaka isika rehetra ka ny olon-tsotra tsy afaka nanoratra mombamomba mazava momba ny tenany raha toa ka tsy maintsy.
Raha tsapanao fa milamina ny famerenana indray, azonao atao ny manomboka tena marina momba ny tenanao, manaiky ny fomban'ny fitondran-tena tianao hovaina. Mety ho avy amin'ny inona izany mangataka andro maharitra na ny fisorohana, amin'ny fomba mety hanaratsy endrika ny fifandraisana hatrany hatrany.
Ny fiasana amin'ny fanovana ireo fahazarana ireo dia mety hisy fiatraikany tsara sy maharitra amin'ny fiainanao manontolo, nefa mety ho sarotra ny hiasa irery. Ny fahazoana fanampiana amin'ny mpitsabo na mpanazatra fiainana dia mety ho hetsika hendry mba hitrangan'ny fanovana maharitra.
Tadidio fa afaka manomboka kely ianao! Ny famerenanao ny tenanao dia tsy midika hoe manodina tanteraka ny fiainanao amin'ny fanovana kely dia mety hitarika fiovana maharitra amin'ny lasa bebe kokoa manan-danja fomba hafa noho ny fivarotana ny fanananao rehetra mba hahafahanao miaina amin'ny yurt any Nepal afaka.
Raha manandrana miaina am-pieritreretana bebe kokoa ianao ary amin'izao fotoana izao hanamaivanana ny fanahiana, ohatra, dia azonao atao ny manokana fotoana roa minitra 15 minitra isan'andro (zavatra voalohany amin'ny maraina ary zavatra farany amin'ny hariva, andao isika lazao) ho fisaintsainana an-tsaina. Raha mety aminao izany dia azonao atao ny mampitombo azy io ho sakana 30 minitra.
Raha te hanova asa ianao, andramo mandeha tapa-potoana amin'ny asanao ankehitriny ary makà gigana tapa-potoana hafa ao amin'ny sahaninao vao nofidina hizaha toetra ny rano alohan'ny antsitrika tanteraka.
Tsy mora ny fanovana tena izy, indrindra satria misy ny fanontanina amin'ny tenanao ny fanontaniana sarotra sasany sy ny fanekena ny sasany fahamarinana mety ho sarotra ekena izany. Ny tena fahatsoram-po amin'ny valinteninao dia mety hampiharihary ireo lafin-javatra izay nisorohanao tsy hiresahana, na noho ny tahotra ho anao na noho ny mety handiso fanantenana ny hafa.
Mety ho hitanao fa nahatratra ny fetran'ny fahafahanao ho tonga zavatra tsy ianao ary tsy ho tonga intsony ary ny fanovana izay hanary ny fiainanao (sy ny fiainan'ny olona akaiky anao) korontana mandritra ny fotoana fohy, fa amin'ny farany, mety ho faly ianao amin'ny farany.
Mora ny mifindra any amin'ny faritra vaovao na manova ny fitafianao, fa ny fanovana asa na famaranana ny fiaraha-miasa izay tsy miasa intsony dia tantara hafa mihitsy.
Amin'ny farany, ny toe-javatra dia tonga amin'ny fahatokisanao tena amin'ny tenanao momba ny maha-ianao anao izao, izay tianao hahatongavana, ary mahita làlana iray mankany amin'ny iray hafa.
mandray ny tsiny amin'ny olon-kafa
ny fomba hiatrehana ny fitiavana lehilahy manambady
ny vadiko mibedy ahy toy ny zaza
ny fomba tsy ho sosotra sy tezitra
ny fomba hanampiana ny namanao hiala fisarahana